Home Somali News Somalia: Xukuumadda Oo Sheegtay Inay Dib U Furmi-doonaan Wadahadaladii U Dhexeeyay Somaliland
Ra’iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya, Maxamed Cumar Carte Qaalib oo wareysi siiyay idaacadda ku hadasha afka dowladda Soomaaliya ayaa sheegay maanta in wadahadalladan ay yihiin kuwo lagu doonayo in mar kale dib loogu soo celiyo midnimadii Soomaaliya, isla markaana walaalaha Somaliland lagu doono inay ka gudbaan gooni-isku-taagga.
Sidoo kale Mr. Carte wuxuu sheegay in qodobbada la rabo in wada-hadalladan looga hadlo in ay mid yihiin; wada-qaybsiga mamulka maaliyada, wada-shaqaynta maxkamadaha, fulinta sharuuc waddanka loo dajiyay inuu ku dhaqmo iyo arrimo kale oo dani ugu jirto ummadda Soomaaliyeed.
“Run ahaantii wadahadalladu dib ayay u billaabmi doonaan, markii 60-ka la isku darsamay, waxay ahayd mid ku billowday qaab wanaagsan, marka runtii waxay u baahan tahay inuu wadahadalku noqdo mid mar kale la isku keeno Soomaali weyn; oo aysan noqon mid lagu kala tega.” ayuu yidhi Ra’iisul wasaare ku-xigeen Somalia.
Ugu dambayn dowladda fedaraalka Soomaaliya ayaa ku dadaalaysa inay ka miro-dhaliso wadahadalada ay kula jirto maamulka Somaliland, waxana xusid mudan in dhaw jeer ay is-hor-fariisteen mas’uuliyiinta dowladda federaalka iyo kuwa Somaliland, kuwaaasoo ay ku gaareen qodobbo dhawr ah.